Waa kuma ciyaaryahanka ka baxsanayay Daliban ee diyaarada kasoo dhacay | Berberanews.com
Home CAYAARO Waa kuma ciyaaryahanka ka baxsanayay Daliban ee diyaarada kasoo dhacay
Waa kuma ciyaaryahanka ka baxsanayay Daliban ee diyaarada kasoo dhacay
Mas’uuliyiinta Afghanistan ayaa xaqiijiyay in wiil dhalinyaro ah oo cayaaryahan kubbadda cagta ah uu dhintay ka dib markii uu isku dayay inuu ku ku dhago oo uu fuulo diyaarad militari oo Mareykanka leeyahay oo ka dhoofaysay garoonka diyaaradaha ee Kabul.
Zaki Anwari, oo 19 jir ah, wuxuu u soo ciyaaray xulka qaranka Afghanistan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan goorta uu dhintay lama shaacin.
Tan iyo markii ay Taalibaan dib u qabsadeen Afgaanistaan, kumanaan qof ayaa ku soo xoomay gegida dayuuradaha ee Kaabuul iyadoo dalalka reer Galbeedka ay ku dadaalayaan inay daad gureeyaan muwaadiniintooda iyo asxaabtooda reer Afghanistan.
Sawirro ayaa soo baxay Isniintii oo muujinaya boqolaal qof oo dhinac ordaya diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee Mareykanka waxaana la arkayay dadka qaar oo ku dheggan dhinaceeda.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in ugu yaraan laba qof ay dhinteen ka dib markii diyaaradda ay kacday. Ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in haraaga bini’aadam laga helay qeybta hoose ee qalabka ay ku degto diyaaradda kadib markii ay gaartay Qatar.
Bayaan uu barta Facebook -ga, soo dhigay Agaasinka Guud ee Isboortiga ee Afgaanistaan ​​ayaa tacsi u diray Mr Anwari.
“Alle janada ha geeyo, anaga iyo dhammaan asxaabtiisa ciyaaraha waan u duceeyneynaa,” ayuu yiri.
Qaar kale ayaa sidoo kale ducadooda ku wadaagayay baraha bulshada.
“Tagitaankiisu waa murugo weyn,” ayuu ku qoray mid ka mid ah isticmaaleyaasheeda Instagram. “Xusuustaadu had iyo jeer waa ii qaali”.
Ku dhawaad ​5000 oo askari oo Mareykan ah ayaa si kumeelgaar ah gacanta ugu haya gagida diyaaradaha caalamiga ah ee Karzai ee Kabul.
Taalibaan ayaa ka horjoogsanaya dadka reer Afgaanistaan ​​inay soo galaan gegida dayaaradaha iyagoo aan haysan dukumentiyada socdaalka – hase yeeshee xitaa kuwa haysta oggolaanshaha saxda ah ayaa la halgamaya inay gudaha u galaan garoonka.
Iyada oo ay muuqaalo laga baahiyay garoonka diyaaradaha ay muujinayaan jahwarer, ayuu haddana Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden difaacay sida uu u maareeyay ka bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan.
Mr Biden ayaa sheegay in laga yaabo in ciidamada Mareykanka ay sii joogaan Afgaanistaan ​​wixii ka dambeeya xilligii loo qorsheeyay ee ahaa 31 -ka Ogosto oo ay ku heshiiyeen Taliban.
Previous article“Waajibka inaga saaran Muslinimada”Sheekh Berberawi
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo kulan la qaatay shirguddoonka Wakiillada
Liverpool 3- 2 Milan
Weeraryahanka Barcelona Martin Braithwaite oo qalliin lagu samaynayo
Chelsea oo cambaareyneysa xadgudubyada diimeed ee lala beegsanayo Aston Villa
MUUSE BIIXI VS FARMAAJO: Laba Hoggaamiye oo Aragtiyo kala Duwan ka...